Ulujonga njani uMkhwa weHlabathi ku-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 606
I-Twitter iye yaduma kwihlabathi liphela ngokwabelana ngolwazi ngexesha lokurekhoda uninzi lwamalungu ayo. Oku kubulela kwinto eyaziwa njengesihloko esihamba phambili okanye ngesiSpanish "iindlela", xa oko kwabelwana ngako kuthandwa kakhulu phakathi kwabo banxulumene nale nethiwekhi yoluntu.
Umxholo ohamba phambili uyavunywa njengeyona nto kuthethwe ngayo ngezihloko ngalo mzuzu. Ziloluhlu lweetweets ezithetha ngesihloko esinye, izimvo zichaziwe kwaye kwabelwana ngazo ngamawaka abasebenzisi. Ngamanye amaxesha zinxulumene neziganeko ezithandekayo neziphikisanayo, ezinokuthi iingxoxo zazo zande iiyure okanye neentsuku.
Ixesha elihamba ngokulandelelana lihambelana negama "wentsholongwane." Igama elisetyenziswa ngokubanzi njengesikweko malunga nendlela iintsholongwane ezisebenza ngayo kwizinto eziphilayo, njengoko ibhekisa kwimicimbi esasazeka ngokukhawuleza kwinethiwekhi ukusuka kwisigidi sabasebenzisi ababelana ngayo.
Ngapha koko, iintsingiselo zimiselwe abasebenzisi. Kungenxa yokuba ialgorithm isebenzisa izinto njengoku, umdla wabadibeneyo, indawo abahlala kuyo, kunye nezona zinto zithethwe kakhulu ngezihloko ezinxulumene nokukhangelwa komsebenzisi.
Ukufikelela kwezona zinto zibalulekileyo, uya kufuna kuphela isixhobo ukufikelela kwiakhawunti yakho ye-twitter.
Ukusuka kwi-twitter app kwi-Smartphone yakho:
Uya kudinga ukufaka iakhawunti yakho usebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Nje ukuba ungene ngemvume, yiya ezantsi kunxibelelwano lwe-twitter kwaye ujonge uphawu lweglasi. Le icon yenzelwe ukukhangela abasebenzisi kunye neetweets.
Xa ufake i icon, isikrini siyakuba sisixhobo esibonakalayo esenziwe phezulu kwibar yokukhangela apho unokuchwetheza khona kwiikhrayitheriya zokukhangela ozifunayo.
Emazantsi uza kubona iindlela ezikhoyo. Uyakwazi ukubona zombini imeko zehlabathi kunye neyengingqi kunye neyasekhaya. Kodwa eyona nto ikhuselekileyo kukuba ezona zibalulekileyo zihambelana nommandla wakho.
Unokwenza ngokusesikweni imeko ngokwendawo ethile. Kule nto kuya kufuneka uye kwinxalenye yemenyu yeprofayile yakho ukutshintsha indawo. Nje ukuba wenze, imeko yaloo ndawo iya kubonakala kukhangelo lwakho.
Ukuba ufaka iprofayile yakho kwikhompyuter yakho:
Kuya kufuneka ungene ngesikhangeli sewebhu kwiphepha le-twitter. Emva kokungena ungene, imikhwa inokubonwa ngokulula kwicala lasekunene lenkangeleko yakho.
Kweli candelo zonke iindlela ziya kufumaneka ngokwendawo okuyo. Uya kufumana isihloko sabo kunye nenani leetweets ezinxulumene nazo.
Xa ungena kuyo nayiphi na intsingiselo, zonke ii-tweets ziya kuvela kwindawo esembindini yeakhawunti yakho, kanye kwimida yakho. Uza kubona zonke iitweets, amagqabantshintshi, imifanekiso kunye neencoko ezahlulwe ngokwendlela.
Iimpawu ziya kudityaniswa nophawu lwe-hashtag, esisikhombisi sokuhlelwa esisetyenziswa ziinethiwekhi ukuzidibanisa.
1 Intsholongwane kwi-twitter
2 Ukusuka kwi-twitter app kwi-Smartphone yakho:
3 Ukuba ufaka iprofayile yakho kwikhompyuter yakho: